Maxkamada qalabka sida ee DFS oo xukuntay Aabe dhalay wiil shabaab ku biiray +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Maxkamada qalabka sida ee DFS oo xukuntay Aabe dhalay wiil shabaab ku biiray +COD
Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida ee Somaliya, ayaa waxay shalay xukun Lix bilood oo xabsi ciidan ah, ay ku riday aabe Cismaan Cali Maalin, oo wiil uu dhalay lagu helay Shabaabnimo.
Aabahaan, ayaa dhalay Daahir Cismaan Cali oo loo yaqaano (Daahir Dayax), kaasoo ay shalay Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida, ay ku xukuntay xukun dil toogasho ah.
Daahir Dayax iyo nin kale oo maqan waxaa lagu helay in ay ka dambeeyeen dilkii Allaha u naxariistee Yuusuf Xasan Cadow (Yuusuf Taraafiko), oo ka tirsanaa Ciidanka Ilaalada ee Wadooyinka. Waxayna bilowgii bishii Ramadaan ay ku dileen Degmada Kaaraan.
Afhayeenka Maxkamada Ciidamada Qalabka Sida C/laahi Maxamed Muuse (Keyse), ayaa sheegaaya in waalid kasta oo aan laamaha ammaanka ku soo wargelin, in ubadkoodu ay ka tirsan Al Shabaab, la xukumi doono kolka gacanta lagu soo dhigo.